Carla Koppell - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Ms. Koppell waxay hormuud ka tahay barnaamij ku saabsan kala duwanaanta iyo ku darista arrimaha caalamiga ah iyadoo ah Shakhsiyad Sharafeed leh Machadka Georgetown ee Haweenka, Nabadda iyo Amniga, kaas oo baaraya isla markaana iftiiminaya doorka haweenka ee joojinta nabadda iyo amniga, xoojinta dhaqaalaha, ka hortagga xagjirnimada rabshadaha, iyo yareynta isbedelka cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Waxay dhowaan u soo shaqeysay madaxweyne kuxigeen la Machadka Nabada ee Mareykanka. Ka hor taas waxay ahayd sarkaalka madaxa istaraatiijiyadda USAID waxaana loo magacaabay isku duwaha ugu sareeya ee hay'adda USAID ee sinnaanta iyo xoojinta haweenka.
Doorka kale waxaa ka mid ahaa agaasimaha Machadka Amniga guud, iyo kuxigeenka xog hayaha arrimaha caalamiga ee Wasaaradda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalada. Waxay sidoo kale ka shaqeysay Xarunta Caalamiga ah ee Woodrow Wilson ee Aqoonyahannada iyo Ururka Cuntada iyo Beeraha ee UN.
Ms. Koppell waxay Master-ka ku haysataa Siyaasadda Guud ee Dugsiga Harvard Kennedy iyo Bachelor of Science oo ka socda Jaamacadda Cornell.